Akuko - interpack na components 2021 kagburu
Na nkwekọrịta ya na ndị mmekọ ya na mkpakọrịta na ụlọ ọrụ ahụ, yana kọmitii ndụmọdụ gbasara azụmaahịa, Messe Düsseldorf kpebiri ịkagbu ma interpack na components 2021, nke a ga - eme site na 25 February ruo 3 March, n'ihi mmachi metụtara COVID -19 oria ojoo.
“N’abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Nọvemba, gọọmentị etiti na steeti ndị German kpebiri itinye usoro siri ike na Germany, yana ikekwe gbasaa usoro ndị a n’ime afọ ọhụrụ. Nke a, ọ dị nwute, enyeghị ihe kpatara olile anya na ọnọdụ ahụ ga-akawanye mma karịa n'ime ọnwa ndị na-abịa. Nke a ga-emetụta ihe niile Messe Düsseldorf mere na nkeji nke mbụ, ”ka Wolfram N. Diener, onye isi oche nke Messe Düsseldorf kọwara. "Anyị na-elekwasị anya ugbu a na mbipụta ọzọ nke ngwongwo, nke ga-ewere ọnọdụ na Mee 2023 dị ka atụmatụ, na nke anyị ga-agbakwunye na ntinye dị n'ịntanetị."
Messe Düsseldorf enyela ndị na-edebanye aha ha edepụtara ọnọdụ pụrụ iche maka nsonye ha ma n'otu oge ahụ nye ha ikike pụrụ iche nke ịkwụsị maka ụlọ ọrụ ndị ahụ enweghị ike ma ọ bụ na-achọghị isonye.
“E wezụga na pụrụ iche mkpuchi ahịa, ọ na-enye, interpack bụ isi e ji kpọmkwem mgbanwe ọmụma n'etiti ahịa na-eduga na ụlọ ọrụ na n'elu mkpebi na-eme maka ika aha gburugburu ụwa. Anyị nabatara mkpebi Messe Düsseldorf ịkagbu 202 interpack wee lekwasị anya na 2023, "Christian Traumann kwuru, Onye isi ala nke 2021 na Onye Isi Nchịkwa & Onye isi otu na Multivac Sepp Haggenmüller SE & Co. KG.
“Maka ụlọ ọrụ ahụ, nzukọ ndị mmadụ na-eme na ahụmịhe ndụ ka dị oke mkpa, ọkachasị mgbe ọ gbasara teknụzụ dị mgbagwoju anya. Ha abụọ na-eme ka ntule ahịa na-aga n'ihu wee dọta ma bulie echiche ọhụrụ yana ụzọ ọhụụ na netwọkụ - nke a bụ ihe usoro ịntanetị na-enye naanị n'otu akụkụ, "Richard Clemens kwukwara, Onye isi Nchịkwa nke VDMA Food Processing and Packaging Machinery Association. "Anyị na-now anya na-aga nke ọma interpack 2023, ebe ụlọ ọrụ nwere ike ọzọkwa na-ezukọta na ya na-eduga zuru ụwa ọnụ ahia ngosi na Düsseldorf."